Jordan Henderson oo ka baqaya inuu seego waajibaadka England kadib dhaawaca gumaarka ee Soo gaaray.
Paul Pogba oo ka hadlay hadii uu doonayo heshiiska Cusub ee Manchester United
Weeraryahan horey uga tirsanaa kooxda Liverpool oo geeriyooday
Daafaca kooxda Manchester City Ruben Dias oo Tilmaamay sirta ka dambeysa guulahooda.
Home Horyaalka Ingiriiska Jordan Henderson oo ka baqaya inuu seego waajibaadka England kadib dhaawaca gumaarka...
Kabtanka Liverpool Jordan Henderson ayaa ka baqaya dhaawaca gumaarka ah ee uu ka soo gaaray guuldaradii 2-0 ee ka soo gaartay Everton kulankii isbuucaan iyadoo laga yaabo inuu garoomada ka maqnaado dhowr isbuuc.
Henderson ayaa loo magacaabay daafaca dhexe ciyaartii lixaad oo isku xigta, Henderson wuxuu maamulay 29 daqiiqo oo ciyaarta ah ka hor inta uusan ku bixin dhaawaca waana markii afaraad xidiga xulka England ay dhibaato soo gaarto xilli ciyaareedkan.
Henderson wuxuu ku dhibtooday inuu taam ahaado
Ciyaarta ka dib, Klopp wuxuu ku tilmaamay saadaasha Henderson ‘mid aan fiicneyn’, walaacyadaas waxaa taageeray The Times, oo xusaya in baaritaannada bilowga ah ay durba meesha ka saareen inuusan ka qeyb qaadan karin tartanka Champions League 16ka lugta Labaad ee wajahayaan RB Leipzig bisha Maarso 10 keeda.
Henderson ayaa sidoo kale ka baqaya inuu seego booskiisa xulka England ee uu maamulaha ka yahay Gareth Southgate oo dhawaan ciyaari donaan isreebreebka Koobka Adduunka dhamaadka bisha Maarso ayaa laga yaabaa inuu shaki ku jiro oo Looga yeeri waayo Three Lions.
Kooxda Southgate ayaa wajaheysa San Marino, Albania iyo Poland inta u dhaxeysa March 25 iyo 31, laakiin Henderson wuxuu ka walaacsan yahay inuusan ku soo laaban waqtigii uu soo muuqan lahaa, ama ugu yaraan uusan helin waqti ku filan oo uu ku cadeeyo taam ahaanshihiisa.
Si kastaba ha noqotee, halka Southgate ay leedahay barkad tayo sare leh oo ay ku soo jiidan karto Henderson, Klopp ma lahan raaxo la mid ah waana laga xumaan doonaa inuu arko difaac kale oo deg deg ah oo laga saaray dhaawac.
Kaydka ugu horreeya ee Fabinho ayaa sidoo kale la maqnaa dhaawac muruqa ah usbuucyadii la soo dhaafay, taasoo ka dhigeysa Henderson inuu ka garab ciyaaro saxiixa ay liverpool lasoo wareegtay bishii Janaayo ee Ozan Kabak.
Klopp wuxuu doortay inuu keeno da ‘yarta Nat Phillips ka dib dhaawacii Henderson, isagoo ka carooday imaatinka cusub ee Ben Davies kaasoo aan weli u muuqan Liverpool tan iyo markii uu ka soo biiray Preston North End heshiis uu ku qiimeeyay gobolka 1.6 milyan ginni.
Davies wali ma uusan ciyaarin kulankiisii ugu horeysay
Xulashada seddexaad ee ugu dambeysa ee tababaraha ayaa ah 20 jir Rhys Williams, kaasoo si fiican uga soo muuqan kara awooda qaar ka mid ah ciyaarta soo socota ee Liverpool, booqasho uu ku tagayo Bramall Lane oo uu wajihi doono Sheffield United 28ka Febraayo.
Klopp wuxuu rajeynayaa in lugta soo laabashada ee ka dhanka ah Leipzig aysan dhibaato ku noqon doonin kooxdiisa, oo 2-0 kaga badisay garoonkeeda kulankii ugu horreeyay. Si kastaba ha noqotee, difaaciisa oo aad u fidsan iyo Liverpool oo ku jirta xaalad adag, madaxdu xaqiiqdii waxba kama qaban doonaan.
Previous articleShola Shoretire oo Riyadiisa Rumoowday kadib Safashadiisii Xalay.
Next articleThomas Thuchel oo ka hadlay go’aankii uu ku bedelay Callum- hudson-odio.
Paul Pogba oo ka hadlay hadii uu doonayo heshiiska Cusub ee...
Wararka Ciyaaraha Maanta1872
Suuqa kala iibsiga726